Udliwanondlebe no-Enrique Laso, umbhali wenoveli weenkwenkwezi ka-2016 | Uncwadi lwangoku
Udliwanondlebe no-Enrique Laso, umbhali wenoveli weqonga ka-2016
UDiana Millan | | Udliwano-ndlebe, Ababhali
I-Actualidad Literatura ifumene ithuba lokwenza udliwanondlebe no-Enrique Laso. Le ndoda yaseBadajoz yahlala eMadrid, yathanda ukufunda, i-cinema kwaye ngaphezu kwayo yonke le nto ukubaleka Ungomnye wabaphumeleleyo abaphumeleleyo baseSpain kule 2016.
Umbhali weSaga kaEthan Bush kunye noBawo Salas usinika ithuba lokwazi ukuba uhambo lwakhe belunjani kwaye yintoni elandelayo ngo-2017
Iindaba zoncwadi: Khawusixelele kancinci, Enrique… Yavela nini i-bug ekujike yakwenza umbhali?
UEnrique Laso: Ndiqale ndisengumntwana. Kwiminyaka esibhozo wayesele egqibile inoveli emfutshane. Umnqweno wam ubangelwa ikakhulu ngutatomkhulu wam, owandishiyela ilayibrari yakhe enkulu wandikhuthaza ukuba ndibhale amabali.
AL: Kuluncedo olukhulu. Unelayibrari onayo kufuneka ube nokukhetha kwangaphambili. Zeziphi iincwadi onokuthi zishiye ezona mpembelelo kuwe?
I: Uninzi lwe. Ngaphandle kwamathandabuzo Intaba yeMilingo, Isibetho, uMdlali, uBella del Señor okanye u-El Túnel bandiphawule kakhulu, kodwa uluhlu lude kakhulu.
AL: Ngaba ngababhali bakho obathandayo?
I: UThomas Mann noDostoevsky. Ndathandana xa ndandikwishumi elivisayo, kwaye kunzima ukubaleka apho.
AL: Usixelele ukuba eneminyaka esibhozo sele unayo incwadi yakho yokuqala emfutshane egqityiweyo. Uyakhumbula ukuba lalithini ibali lakho lokuqala?
I: Ibali lam lokuqala hayi, kuba iyakuba yiminyaka eyi-6. Kodwa inoveli yam yokuqala emfutshane, endikhankanye ngaphambili, ewe. Yayibizwa ngokuba yiROCK, kwaye yayi malunga nenkwenkwe eyajika yaba lilitye kuba yayiqondwa nangubani na.
AL: Kwaye ukusukela ngoko, belunjani uhambo lwakho njengombhali?
I: Ndiphumelele amabhaso okuqala esikolweni. Emva kwexesha kwiziko ndaqhubeka. Ndide ndanikwa ibhaso leSizwe lemihobe eselula ngo-1994, nto leyo yandikhuthaza kakhulu. Yayilibhaso elidumileyo kwaye linikwe imali kakuhle.
AL: Ewe liqhayiya elikhulu kumfana okwelo xesha. Ukuza kuthi ga ngoku, zingaphi iincwadi osele uzipapashile?
I: Ukuba ndibala iincwadana zemigaqo kunye nawo onke amagama abiziweyo, ngaphezulu kwe-150. Ukuba ndithetha ngeenoveli kuphela kunye neencwadi zemibongo, ngaphezulu kwama-50.
AL: Ngeempapasho ezininzi kangaka, kuya kufuneka ubenamaqhinga, yintoni oyiphembayo xa ubhala?
I: Kwiindaba okanye izinto endizibonayo kwaye zenzeka phambi kwamehlo am. Izihlangu zihlala ziyinto esekwe kumnyani wokwenyani. Ukusuka apho ukucinga kwam kuqala. Ngamanye amaxesha nakwiphupha.
AL: Ababhali abaninzi banezinto abazithandayo xa kufikwa emsebenzini.Ngaba unazo naziphi na izithethe xa kufikwa ekubhaleni?
I: Uninzi lwe. Yinto ephantse ibe yintsholongwane. Ndihlala ndiqala incwadana entsha yenoveli nganye, kwaye andiyiqali de ndibenesihloko, isishwankathelo, amaphepha abalinganiswa, njl. Ungaze ebusuku, kuba ndiyakuthanda ukulala (ndilala iiyure ezingama-9-10 yonke imihla, ndibala i-naps). Ndingachitha ixesha elininzi ndithetha ngee-quirks zam, kodwa andifuni kuvakala ngokungalingani.
AL: Sitshele kancinci ngamava xa upapasha umsebenzi wakho wokuqala.
I: Ewe, abokuqala baphuma neengqokelela zemibongo okanye amabali, ngenxa yamabhaso awaphumeleleyo. Indenze ndangumbono ongathethekiyo. Xa ndazisungulayo ndazipapasha ndicinga ukuba yindlela yokuphuma, kwaye ukusukela ngoko ndathengisa ngaphezulu kweencwadi ezingama-700.000, ayisiyonto incinci leyo. Ndikhuphe iinoveli ezininzi ephepheni kunye nabapapashi bemveli.
AL: Kodwa ayisibavakalisi kuphela abanomdla. Ezinye iinkampani zemveliso ziye zankqonkqoza ekhayeni lakho.Zingaphi iincwadi zakho ezinokulungiswa kwefilimu?
I: Sele itshintshiwe, eSpain nangohlahlo-lwabiwo mali oluncinci, isuka ESIHOGWENI. Abanye ababini banamalungelo athengiselwe iarhente yaseHollywood: AMARHUMO ABANGASEKHO KUNYE NAMATYALA AMABALAHLA. Inkampani yokuvelisa inomdla kule yokuqala, kodwa asifikanga kwisivumelwano kuba befuna ukwenza utshintsho oluninzi kule ncwadi. Ngowesibini besithethathethana nomvelisi omkhulu ngaphezulu konyaka. Ezi ngoma zihamba kancinci, ngakumbi xa umntu enobuntu njengam. Inkampani yokuvelisa yaseSpain ikwanomdla wokwenza uthotho kunye nesaga ye-Ethan Bush.
AL: Vumela ukucinga kwakho kusebenze. Ngubani ongathanda ukudlala le ndima?
I: Ndingathanda ukuba abe ngumdlali weqonga obalaseleyo, njengaye nawuphi na umbhali. ULeonardo DiCaprio ngumdlali weqonga endimthandayo namhlanje, ke ukuba ndinokuba nobunewunewu bokukhetha umntu endifuna uEthan Bush abe nguye, inganguye, nangona ngokwenyama bahluke kakhulu.
AL: Abanye ababhali bahlala basebenzisana nabanye ababhali Ngaba ukhe wasebenzisana nomntu okanye ungathanda?
I: Ababhali, kungekho namnye. Ndisebenzisene nabaguquleli abaninzi, kuba iincwadi zam ziguqulelwe kwiilwimi ezininzi. Kwaye andifuni ukusebenzisana nabani na. Bacebisile kum, kwaye andikhange ndivume, kodwa ukuba 'abanditsali', ayisiyonto indenza ndikholelwe okukuko.
Kukho iincwadana, kodwa lolunye uhlobo lokusebenzisana. Apho ndikhuphe izikhokelo ezininzi ezibhalwe ezandleni ezine.
AL: Ngaba wakha wasebenzisa isibizo?
I: Ewe, ndisebenzisa ii-pseudonyms ezingekho ngaphantsi kwe-13. Uninzi lweencwadana, nangona ezinye zinikezelwe kwiinyani. Inye kuphela endiyikhuphileyo (ngenkani) nguHenry Osal. Kukho ezinye ezili-12 zokuhamba, kwaye ndiyathemba ukuba akukho mntu wakha wadibana nazo.
AL: Asizukunyanzelisa kwakhona emva koko. Incwadi yesihlanu ye-Ethan Bush Saga "Iphi Imiphefumlo Iphumle?" Isandula ukukhutshwa. Kunjani ukwamkelwa?
I: Ewe kuselithuba ukwenza uvavanyo, kuba isandula ukwaziswa. Ewe kukho into elungileyo: abafundi sele bendicela ukuba ndifake isavenge sesithandathu.
AL: Yakho fans bangayivuyela impendulo yalo mbuzo… Zeziphi iiprojekthi onazo ezandleni zakho?
I: Ndineqela eli-2017, iincwadana ecaleni. Esinye isavenge sika-'El padre Salas ', isavenge sesithandathu sika-Ethan Bush- nesiza kukhutshwa ngentwasahlobo kwaye siyakubizwa ngokuba YIQWESHO ELIMNYAMA-ingqokelela yemibongo enesihloko esithi EPITAFIO kunye nenoveli ekhoyo: CATACLISMO.
AL: U-2017 ngunyaka othembisa kakuhle… Umbuzo wokugqibela, ungamcebisa uthini umntu oqala ukubhala?
I: Funda okuninzi kwaye ubhale okuninzi. Ayisoze ilahlekelwe yinkohliso kunye nokholo kumathuba ayo. Ndiqale ukuthengisa kancinci xa ndandineminyaka engama-39, kwaye ndinokuphila ngokubhala ukusukela ndandineminyaka engama-41 -oko kukuthi, ngaphezulu kweminyaka emithathu edlulileyo-, ke lo ngumsebenzi omde. Ngeke wazi ukuba abafundi baya kukunika nini uvuyo olukhulu.
AL: Enkosi Enrique ngokusinikela ngexesha lakho.
I: Enkosi kakhulu kolu dliwanondlebe oluhle.
Ukusuka kwi-Actualidad Literatura, sicebisa ukuba ungavumeli ukuba unyaka uphele ungakhange ufunde naziphi na iinoveli zakhe. Ukurhoxiswa kuqinisekisiwe.
Ukufota ngu-Ediciones Proust
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » Udliwanondlebe no-Enrique Laso, umbhali wenoveli weqonga ka-2016
Izizathu ezibini zoncwadi lokundwendwela iNgilane kwi8